Ugu Weyn Ee Spinach
Waxaan dooran noocyada ugu wanaagsan ee isbinaajka
Spinach waa warshad sannadlaha ah oo qashinka ah oo ka tirsan qoyska Amaranth, iyo qoondaynta qadiimka ah waa warshadda Mare. Isku-buufin afka ah wuxuu gaari karaa heerkul dhan 35 ilaa 40 sentimitir. Bishii Luulyo, ubax yaryar oo cagaaran ayaa bilaabaya inay sameeyaan dhirta, taas oo marar badan ku beddesho miraha dhirta oo u eg nuts.
Hababka isweydaarka isweydaarsiga xilliga qaboobaha
Khubarada ku takhasusay nafaqada waxay kugula talinayaan isweydaarka cuntadaada sida habka ilaalinta dhalinyarada iyo kor u qaadida caafimaadka. Warshadu waxay si fudud u tahay dukaanka macaamiisha waxtarka leh ee ka caawiya jidhka inuu shaqeeyo 100%. Si kastaba ha noqotee, haddii xilliga xagaaga aysan dhib ku ahayn in la helo cagaarka isbinaajka, ka dibna xilliga qaboobaha caleemaha cusub waa mid aan caadi ahayn.
Isbeddel strawberry iyo sifooyinka sii kordhaya
Tani waa mid aad u xiiso badan, iyo ugu muhiimsan, warshad waxtar leh. Magaciisa sayniska waa mary, waa mid aad u badan, laakiin waxaa sidoo kale loo yaqaannaa isbinaajka caadiga ah ee raspberry-raspberry. Isla mar ahaantaana waxay u egtahay isbinaajka, strawberry iyo raspberry. Caan ka mid ah dhirta ayaa u muuqatay muuqaal qalaad iyo faa'iido weyn u leh jirka bini'aadamka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Spinach 2019